Religious Archives - Pyone Pyone Lay
လူတစ်သိန်းကိုကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှသည့် ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်း(ပုံကိုနှိပ်ပြီးဖတ်ပါ)……
လူတစ်သိန်းကိုကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှသည့် ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်း(ပုံကိုနှိပ်ပြီးဖတ်ပါ)…… ဘုရားရှိခိုးနည်း တစ်ကြိမ် ဘုရားရှိ ခိုးလို့ ရှိရင် လူတစ် သိန်းကျွေး ရတာနဲ့ ညီမျှ တဲ့ ကုသိုလ် ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်းရှိတယ် ။ ဘယ်လို ဘုရားရှိခိုးမ လဲဆိုတော့…. မမြဲသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ် သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါန်းပါ၏ ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)၊ ဆင်းရဲသော ဤခန္ဓာကိုယ် ကို ကိလေသာ အပူခပ် သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော် မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာ အား လှူဒါန်းပါ ၏ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)၊ အစိုးမ …
“ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ” နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကူးလာတယ် ဘုန်းဘုန်းတို့ နှစ်သစ်အချိန်အခါက ကာလ တစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့ သိပ္ပံနည်းအရ နေက ဟိုးဒက္ခိဏ အရပ်ကနေတဖြည်းဖြည်း ရပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကို နှစ်သစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက နေကို ပတ်လှည့်နေတာ။အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ သစ်ပင်တောတောင် ရေမြေတွေလည်း ဥတုအလိုက် နေရဲ့အပူရှိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းကြတယ်။ အဲဒီလိုပြောင်းသလို သက်ရှိသတ္တဝါတွေက ဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့ အကောင်းဆုံးက နှစ်သစ်မှာဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ် မေတ္တာပွားတာ အလွန်တရာ ကောင်း ပါတယ်။ …
သီလရှင်ကို အမျိုးသားတွေ ရှိခိုးသင့်ပါသလား?
သီလရှင်ကို အမျိုးသားတွေ ရှိခိုးသင့်ပါသလား? “သီလရှင်” စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း အကျဉ်းကို အရင် သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တော် အခါကာလမှာ မိထွေးတော် ဂေါတမီကို အကြောင်းပြုပြီး “အမျိုးသမီး သာသနာ” စတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ စာလိုပေလိုတော့ “ဘိက္ခူနီ သာသနာ” လို့ ခေါ်တာပေါ့။ အဲဒီသာသနာဟာ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်ပြီး နှစ်ပေါင်း ငါးရာလောက်မှာပဲ အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်း ရှိသူတွေ မပေါ်ထွန်းတော့လို့ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာသနာနှစ် ( ၉၀၀-၁၄၀၀ )အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ သာသနာတွင်း …
ဘုရား ၊ တရားလုပ်ခြင်း၏ လက်ငင်း အကျိုးကျေးဇူးများ (ရှယ်ထားကြပါ)
ဘုရား ၊ တရားလုပ်ခြင်း၏ လက်ငင်း အကျိုးကျေးဇူးများ (ရှယ်ထားကြပါ) တရားအားထုတ်ရင် စိတ်ကြည်လင်တယ် ။ အေးချမ်းလာတယ်။ အသိဉာဏ်တွေ သန့်ရှင်း လာတယ် ။ မလုပ်သင့်တာတွေ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ အမှားအယွင်း နည်းသွားတယ် ဆိုရင်ပဲ စိတ်ချမ်းသာ လာတယ် ။ လူတွေမှာ စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တာဟာ အမှားအယွင်းကြောင့်ပါ။ ကိုယ့်အမှားရဲ့ ဒဏ်ချက်ကို ကိုယ်ပြန်ခံရတာပဲ ။ တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာ စိတ်အင်မတန် ကြည်လင်လာတဲ့အခါမှာ ဘယ်စကားက ပြောသင့် တယ်။ ဘယ်စကားက မပြောသင့်ဘူး ။ ဘယ်ကိစ္စက လုပ်သင့်တယ် ဘယ်ကိစ္စက မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒါတင်မကဘူး ။ ဘယ်အဝတ်အစားက ဝတ်သင့်တယ် ။ ဘယ်အဝတ်အစားကမဝတ်သင့်ဘူး သိလာ တယ်။ဘယ်အစားက …
မည်သူမှ ဆွမ်းဦး မကပ်နိုင်သော စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီတော်သမိုင်း
မည်သူမှ ဆွမ်းဦး မကပ်နိုင်သော စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီတော်သမိုင်း ပင်းတယမြို့ တစ်စီးရှင် သီဟသူမင်းတရားကြီးနှင့် နောင်အခါ စစ်ကိုင်းမြို့တည် အသင်္ခယာစောယွန်းမင်းကြီး၏ သေနာပတိအမတ်ကြီးဖြစ်သူ ဦးပုညက သက္ကရာဇ်(674)ခုနှစ်တွင် ဤစေတီတော်ကို တည်သည်။ ပုညအမတ်ကြီးက တည်သောကြောင့် ပုညဘုရား ပုညစေတီဟု အစကနဦးက ခေါ်ကြသည် များမကြာမီ ဓာတ်တော်နှစ်ဆူကို ခိုးယူမှု အသိမပေးပဲ ဘုရားတည်မှုတို့ကြောင့် အသင်္ခယာစောယွန်းမင်းကြီးက ပုညအမတ်တို့ကို စစ်ကိုင်းမြို့တွင်ရေချသတ်လေသည်။ သို့သော် အသက်မရှိသည့်ရေက အသက်ရှိသလိုဖြစ်ကာ ရေကနောက်ဆုတ်ပြီး ဘေးကဝန်းရံပြီး ခြံရံထားမှုကြောင့် ရေမနစ်ပဲ ဦးပုညတို့ အသက်ရှင်ကြလေသည်။ထိုအရပ်ကို ရေဝန်းအရပ်ဟု ခေါ်သည်အသင်္ခယာစောယွန်းမင်းက ရေချသတ်သော်လည်း ပုညအမတ်တို့ မသေဘဲ ရှင်ကြသဖြင့် (ပုည ရှင်သတဲ့ ရှင်သတဲ့) ဆိုတဲ့စကားဟာ မြို့ထဲ …
မနက် ဘုရားပန်းအိုးလဲတဲ့အခါ ဒါလေးတော့သိထားပါ
မနက် ဘုရားပန်းအိုးလဲတဲ့အခါ ဒါလေးတော့သိထားပါ လူအများစုရဲ့သဘာဝ ၊ အများစုရယ် မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ၊“နတ် ကိုးကွယ်မှု အားသန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်”တွေကဘုရားပန်းသာ ညှိုးချင် ညှိုးပါစေ။ နတ်ပန်းတော့ အညှိုးမခံနိုင်ဘူး။ ဘုရားစင်မှာ ဆွမ်းခဲဖွယ်ချိုချဉ်ရသာ မရှိရင်သာနေမယ်။ နတ်ရှေ့မှာ အုန်းသီးဆိုလည်း အလုံးလိုက်၊ငှက်ပျောသီးဆိုလည်း အဖီးလိုက်။ ယောဂီတို့ အိမ်တွင်းရေး မသာယာချင်ဘူးလား။(သာယာချင်တယ်။)သာယာချင်တယ်ဆိုရင် ဘုရားပန်း မညှိုးပါစေနဲ့။ ဘုရားပန်းညှိုးပြီဆိုရင်တော့ အနှေးနဲ့ အမြန်ပဲ ကွာမယ်။အိမ်တွင်းရေး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့၊တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အဆင်မပြေ ၊စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေဖြစ်ကြမှာပဲ။ လုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်း စီးပွါးရေးတွေလည်းအဆင်ပြေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဂါထာတွေ၊ မန္တာန်တွေ အမြှုပ်ထွက်အောင် မရွတ်ချင်နေပါ။ ဘုရားပန်း အမြဲတမ်း လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်အောင် ထားမယ်၊သောက်တော်ရေချမ်းလေးကိုလည်း အမြဲတမ်းအေးနေအောင်ထားမယ် ဆိုရင်အိမ်တွင်းရေးလည်း အေးချမ်း၊စီးပွားလမ်းလည်းဖြောင့် ၊အစစအရာရာ အဆင်ပြေမှာပါ။ …
အစွမ်းထက်လှသော မေတ္တာသုတ် အကျိုးကို လက်ငင်းရယူဖို့ နေ့ရက်အလိုက် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ ရွတ်ဖတ်နည်း “မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံ နည်းစနစ်” တနင်္ဂနွေဂြိုလ်သက် ၆ တနင်္လာဂြိုလ်သက် ၁၅ အင်္ဂါဂြိုလ်သက် ၈ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်သက် ၁၇ စနေဂြိုလ်သက်၁၀ ကြာသပတေးဂြိုလ်သက် ၁၉ ရာဟုဂြိုလ်သက် ၁၂ . သောကြာဂြိ်လ်သက် ၂၁ . စုစုပေါင်းဂြိုလ်သက် ၁၀၈ ၁။ တနင်္ဂင်္နွေနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ- . “တနင်္ဂနွေဂြိုလ်မင်းကြီ်းနှင့်တကွတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံး၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊အရှေ့မြောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲ ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၆ ခေါက် …
နဂါးရုံဘုရားများ တည်ထားကိုးကွယ်လာခဲ့ကြခြင်း အကြောင်း
ရုံဘုရားများ တည်ထားကိုးကွယ်လာခဲ့ကြခြင်း အကြောင်း မုစလိန္ဒ သတ္တာဟ(ခြောက်ခုမြောက်) ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် ငါးခုမြောက်ဖြစ်သော အဇပါလ ဆိတ်ကျောင်း ညောင်ပင်ရင်းမှ ဖယ်ခွာပြီးလျှင် ခြောက်ခုမြောက်ဖြစ်သော မဟာဗောဓိပင်၏ အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်ဖြစ်သော နေရာ၌ ရှ်ိသည့် မုစလိန္ဒာရေအိုင်ကြီးအနီး၌ ရှိသော ကျည်းပင်ရင်းသို့ ကြွရောက်သီတင်းသုံးတော်မူလေသည်။ ထိုအခါ၌ အချိန်ခါမဟုတ်သော်လည်း မိုးကြီးက အားပါးတရ မည်သူ့ ကိုမှ မငဲ့ကွက် မညှာတာပါပဲလျှက် ခုနစ်ရက် တိုင်တိုင် ရွာသွန်းဖြိုးလေသည်။ ဤ ကဲ့သို့အချိန်ခါမဟုတ်ပဲ ရွာသွန်းဖြိုးသော မိုးတို့ သည်ကား အတိတ်နိမိတ်ကို ဖေါ်ဆောင်သောအခါ၎င်း ၊ လူ သာမန်တို့ထက်မြတ်သည့် လူသားဖြစ်သော စင်္ကြာမင်းလောင်း ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ ၎င်း …
ဘုရား ၊ တရား လုပ်ခြင်း ၏ လက်ငင်း အကျိုးကျေးဇူး တရားအားထုတ်ရင် စိတ်ကြည်လင်တယ် ။ အေးချမ်းလာတယ် ။အသိဉာဏ်တွေ သန့်ရှင်း လာတယ် ။ မလုပ်သင့်တာတွေ မလုပ်ဖြစ်ဘူး ။အမှားအယွင်း နည်းသွားတယ် ဆိုရင်ပဲ စိတ်ချမ်းသာ လာတယ် ။ လူတွေမှာ စိတ်ဆင်းရဲမှု ဖြစ်တာဟာ အမှားအယွင်းကြောင့်ပါ ။ ကိုယ့်အမှားရဲ့ ဒဏ်ချက်ကို ကိုယ်ပြန်ခံရတာပဲ ။ တရားအားထုတ်တဲ့ အခါမှာ စိတ်အင်မတန် ကြည်လင်လာတဲ့ အခါမှာ ဘယ်စကားက ပြောသင့် တယ် ။ဘယ်စကားက မပြောသင့်ဘူး ။ ဘယ်ကိစ္စက လုပ်သင့်တယ် ဘယ်ကိစ္စက မလုပ်သင့်ဘူး ။ ဒါတင်မကဘူး ။ …
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ရရှိနိုင်သောအကျိုးတရားများ မိမိ၏ အဆွေ ခင်ပွန်း များကို မည်သူကမျှ ပျက်စီးအောင်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးတရားတို့ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်အလုပ်များ၍ တရားအားထုတ်ရန်အတွက် အချိန်မရသောသူများသည် သရဏဂုံသုံးပါးကို အမြဲမပြတ် ရွတ် ဆိုပွားများသင့်ပါသည်။ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါ အကျိုးတရားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁။ ဒိ သာသု ပူဇိတော ဟောမိ။ သွားလေရာ အရပ်တိုင်း၌လေးစားမြတ်နိုးခြင်းခံရမည် ၂ ။ တိက္ခပညော။ ဉာဏ်အလွန်ထက်မြက်မည်။ ၃။ သဗ္ဗေ ဒေဝါနုဝတ္တန္တိ။ နတ်တို့၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းခံရမည်။ ၄။ အမိတဘောဂံ လဘာမဟံ။ စီးပွားရေး အဆင်ပြေမည်။ ၅။ …